« Manararaotra » -
AccueilTresaka« Manararaotra »
« Manararaotra »
14/03/2018 admintriatra Tresaka 0
Nahataitra ny mpanara-baovao taty Antananarivo ny fanambaran’i Andry Rajoelina fa horaisiny an-tanana hono ny fanamboarana izany lalana simba any amin’ny Lalam-pirenena faha-6 izany, nandritra ny fandalovany tany Ambilobe tamin’ny andron’ny vehivavy 8 marsa teo. Angaha hono izy mbola ben’ny tanàna sa olomboafidy aiza no hanana fahefana handeha hanamboatra lalana ?
Voatery nanazava momba ity fanambarana feno hosoka ity moa ny minisitry ny Asa Vaventy mba tsy hahatonga ny olona ho difotry ny fitaka.
Ny fitondrana foibe, no efa mandray an-tanana ny fanamboarana io lalàna resahin-dRajoelina io ary tsy niandry ny tenin-dRajoelina akory dia efa nanomboka ary efa vita ilay izy amin’izao fotoana. Ny ben’ny tanàna ihany koa noa manana alalana hanao ny lalana ao amin’ny tananany raha ilaina izany. Raha misy olon-tsotra tahakan-dry Andry Rajoelina te hanao lalana any amin’ny faritra samihafa any dia mangataka alalana amin’ny minisiteran’ny Asa Vaventy aloha, raha tsy izany dia fisolokiana sy kabary ambony vavahady ihany. Manararaotra tokoa angamba ry Andry Rajoelina manao toky fitaka any amin’ny tany lavitra andriana any.
Aty amin’ny taona 2018 ihany koa ve dia mbola vokisana izany fanararaotana sy ny fitaka isan-karazany izany ny vahoaka. Na ireny vahoaka nizestiavan’i Andry Rajoelina ireny aza, toa voafitaka ny ankamaroany. Satria dia hanatrika ny fetin’ny vehivavy no anton-dian’izy ireo kinanjo nataon’ny mpanao politika fisehosehoana fotsiny ny sarin’izy ireo taty an-drenivohitra.
Raha tamin’ny andro tsotra ve dia ho tonga handany andro amin-dRajoelina toa ireny ny vahoaka tany Ambilobe?
Inona tokoa moa no mba tombontsoa azon’izany Ambilobe izany tamin’ny fotoana nahateo amin’ny fitondrana an’i Andry Rajoelina. Tsy misy. Na ny lalana hamboarin’ny minisiteran’ny Asa Vaventy amin’izao fotoana aza tadiavin’i Andry Rajoelina taingenana tsotra izao, ary saika hizestiavany mihitsy.
Rehefa te hisehoseho ivelany amin’ny tetikasan’olona, dia tokony mba mahalala menatra na dia any amin’ny tany lavitra andriana any aza, satria tsy maintsy ho tonga aty an-drenivohitra ihany ny akon’ireny.
Ny famerenana ny fahamarinan-toeran’ny fahasalaman’ny profesora Zafy Albert no hiompanan’ireo mpitsabo amin’ izao fotoana izao, ary mila arahi-maso akaiky izany . Mikasika ny fitsaboana kosa indray, dia raisin’ ny fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina an-tanana ...Tohiny